Turkiga: Madaxweyne hore oo daadiyey dhiig badan oo geeriyooday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sunday, Nov 28, 2021.
Turkiga: Madaxweyne hore oo daadiyey dhiig badan oo geeriyooday
A warsame 10 May 2015 10 May 2015
Mareeg.com: Madaxweynihii hore ee Turkiga, Kenan Evren, kaas oo ahaa ninkii hogaaminaayay afgenbi dhiig badan ku daatay oo dalkaasi ka dhacay 1980maadkii ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla caasimadda dalkaasi ee Ankara.
Wuxuu ahaa 97-sano jir. Sanadkii tagay ayaa lagu xukumay xabsi daa’in, taas oo sabab u ahayd ku lug lahaanshihiisa afgembigaasi militari.
Kenan Evren weligiis kamuusan shalaynin, doorkii uu ku lahaa afgembiga dadka badan ay ku dhinteen ee xilligan casriga ah ka dhacay Turkiga.
Xilligaasi oo xukunka ay xoog kula wareegen militeriga, 1980kii, waxaa ka dhashay, in 500 kun oo qof in la xiro, boqollaal lawaayay iyo boqollaal kale oo jirdil u dhimatay.
Waxaan waqtigaasi la mamnuucay dhammaan axsaabta siyaasadda, waxaa la xiray hogaaimayaashooda, waxaana si gaar ah loo bartilmaameedsanayay xisbigii dhaqdhaqaqa Kurdiyiinta ee Turkiga.
Laakiin waxaa jiray qeybo ka mid ah shacabka Turkiga oo afgembiga soo dhaweeyay, iyagoo aaminsanaa in xasilloonida dalkaasi ay soo celineyso.
Balse waxaa nicbaa qeybaha siyaasadda ee Turkiga. Afti dadweyne oo lagu badalaayay dastuurk oo ogolaanaayay in la dacweeyo hogaamiyayaasha nool ee afgembiga ka dambeeyay ayaa siweyn ay u taageereen shacabka, 2010kii.
Kenan Evren waxaa lagu yaqaanay cadaadinta, axsaabta bidixda u janjeera, Kurdiyiinta, wadaniyiinta, iyo Islaamiyiinta.
Marka loo eego xukunkiisii militariga, waxa uu ahaa qof muhiim ah illaa uu maamulkiisii dhammaaday, balse waxaa jiro dad badan oo aan ka murugoondoonin geeridiisa.
RW Cumar oo ka codsaday baarlamanka ansixinta saddexda guddi Qaran
Gabar sanad jir ah oo laga soo badbaadiyey burcad ku afduubatay Muqdisho
Categories Select CategoryAf Soomaali (10,682)Africa (2,395) Algeria (4) Angola (11) Burkina Faso (1) Burundi (14) Cameroon (32) chad (7) congo (61) Djibouti (29) Egypt (68) Eritrea (48) Ethiopia (175) gabon (2) gambia (6) Ghana (21) guinea (1) Guinea-Bissau (4) Ivory Coast (5) Kenya (272) Liberia (23) Libya (76) mali (8) Mauritanian (1) Morocco (20) Namibia (2) niger (8) Nigeria (54) rwanda (15) Sierra Leone (13) South Africa (91) south sudan (94) sudan (41) Tanzania (16) Tunisia (10) uganda (55) Zambia (16) Zimbabwe (27)Asia (427) Afghanistan (19) Bangladesh (4) china (218) India (24) indonesia (12) Malaysia (1) mynamar (6) north korea (2) pakistan (17) Philippine (3) Singapore (1)Australia (16)Business (291)Business (6)canada (1)Economy (168)Editorial (521)Education (39)Entertainment (67)Europe (628) Austria (9) belgium (1) France (26) German (38) Ireland (3) Italy (17) Rusia (35) spain (37) turkey (43) Ukraine (4) United Kindom (185)Exclusive (7)Fashion (4)Featured (8,331)Food (54)Health (241)Horn of Africa (165)Islam (84)Mareeg العربية (3)Middle East (399) Iran (16) Iraq (37) Israel (58) kuwait (4) qatar (9) Saudi Arabia (58) syria (40) UAE (11) Yeman (29)Notices (6)Opinion (58)Our Contacts (1)politics (54)Science (67)Senegal (2)sheeko-jaceyl iyo love (5)sidebar (3)Somalia (5,444) Archive of mareeg (12)Sports (289)technology (58)travel (8)ubax-sheeko.htm (1)Uncategorized (251)United states of america (254)World news (599) PARAGUAY (1) Venezuela (4)
Latest: Somalia allocates $1 million for response to drought